Ebe a na-edebe ọgbụgba ndụ na - ntọala afrikhepri
Fraịdee, Ọktọba 15, 2021
Welcome Categories mmezi
Africa: agro-imperialists weghaara ala ubi
Afirika nke Africa, nke naanị ya nwere otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ala na-eme nri n'ụwa, nwere 41% nke azụmahịa ala, site na ọnụ ọgụgụ azụmahịa 1 n'ofe…
Steve Biko - akọnuche gbara ọchịchịrị
Na Septemba 12, 1977, mgbe ọ dị afọ 31, Steve Biko nwụrụ, naanị ya, n'otu ọnụ ụlọ mkpọrọ dị na Pretoria (South Africa), n'ihi mmerụ ụbụrụ. Foto ya ...
Ọ dị nwute na West akụziere anyị ilelị isi mmalite okwu na akụkọ ihe mere eme. Ihe ọ bụla edeghị na oji na ọcha ka a na-ahụta na ọ nweghị ntọala. Ọzọkwa n'etiti ...
Eji oji, ndi isi ocha - Frantz Fanon
Peau noire, masques blancs bụ ọrụ nke Frantz Fanon dere wee bipụtara site na Le Seuil na 1952. Ọrụ ahụ meghere site na nkwupụta sitere na Aimé Césaire (Discours sur le colonialisme). Ana m ekwu banyere ọtụtụ nde ụmụ nwoke ndị ...
Ihe otiti asatọ nke Africa
Afrịka na-eme ememe afọ iri ise nke ịkpafu malitere site na ogbugbu nke Patrice Lumumba ma jiri oge El Gueddafi mechie obere oge. Colossus nwere ụkwụ ụrọ, Afrịka bụ obodo mmekpa ahụ, ọ bụ…
Ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na Mahadum Frankfurt am Main na-esonye na mmemme nyocha mba banyere ọgba aghara na iweghachi nke ndị gbara ọsọ ndụ. Ọrụ ndị a, nke na-anakọta ọtụtụ nde euro site na ...
Enyemaka mmepe: Egwuregwu
Kedu ihe na-eme na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ French? Anyị ga-achọpụta na ụgbọ oloko nke mmepe nke Africa hapụrụ kemgbe afọ 2000 na anyị anaghị ewepụ ...
France ọ ga-eji Afrika site na CFA franc?
Mamadou Koulibaly kpọrọ oku ka e mepụta ego nweere onwe ya, enweghị ihe jikọrọ ya na ọchịchị ndị mgbe ochie. Mamadou Koulibaly, Onye isi oche nke National Assembly nke Côte d'Ivoire na prọfesọ nke akụnụba, na-enye ìhè ...
Ntụgharị uche banyere ọdịiche ọdịbendị Africa / Europe
Edere m obere ihe ngosi a afọ ole na ole gara aga n'ime usoro nke ọrụ enyemaka na-arụ na Burkina Faso ma na-achọ ime ka ndị ...
Otu ego maka ndị ECOWAS nọ na 2020
CFA franc ga-apụ n'anya. Otu ECOWAS mere ka ekwuputa maka 2020. ECOWAS nke nkwekorita Lagos weputara na Mee 28, 1975 site na iri na ise…
Na-atụgharị uche na ndị ojii ojii nke Dahomey (Benin)
Echiche ụgha gwara anyị na amazons, ụmụ nwanyị dị ike na ndị nwere onwe ha enupụrụ isi megide ụmụ nwoke nakwa na ụmụ nwanyị ndị dike a dị ike n'ihi usoro ...
Afrikhepri bụ usoro ọdịbendị nke ịba uru ọha maka ịkekọrịta ihe ọmụma. Ọ naghị arụ ọrụ maka abamuru nke obere okirikiri mmadụ, mana maka ọmụrụ nwa. Pịa n'okpuru na ...
Mmechi na mgbukpọ eleghara anya site na Papuas
Mkpụrụ obi anyị mara mma na-agwa anyị oge niile na mgbasa ozi ọ bụla na mgbukpọ ahụ dị njọ, gbasara ndị ndị Juu metụtara, mana maka ...
Page 1 nke 4 1 2 ... 4 -esonụ